Museum ofbacco, Museo del Tabaco - Sant Julia de Loria
Ụlọ nri nke ụtaba
Adreesị: Carrer Doctor Palau, 17, Sant Julià de Lòria, AD600, Andorra
Ekwentị: +376 741 545
Ụbọchị mmepe: 1999.
Obere isi nke Andorra maara nke ọma na ndị njem nleta bụ ịzụ ahịa dị ọnụ ahịa , ụlọ ọrụ kachasị ọkụ na Europe, nakwa, n'ezie, ebe ntụrụndụ ski . Ma Andorra nwere ike iju gị anya ọ bụghị naanị nke a! Ọ bụrụ na ịchọrọ ilekwu anya na mba a, banye n'ime akụkọ ntolite ya, mgbe ahụ, ị ​​ga-eleta obodo dị ebube nke dị na ndịda nke isi - Sant Julia de Loria.
Ọrụ ụtaba na-adọrọ mmasị na mpaghara, n'ihi na ya na ya nwere njikọ chiri anya nke ọtụtụ ezinụlọ ezinụlọ. Museo del Tabaco bụ ihe kachasị mma nke obodo Sant Julia de Loria na Andorra. Onye nhazi nke ihe ngosi nka bụ Julia Reig Foundation, nke e guzobere n'afọ 1999. Ụlọ ọrụ Julia Reig bụ òtù na-abaghị uru nke ihe mgbaru ọsọ ya bụ mmepe nke Andorra dịka obodo nke oge a. Echiche nke ịmepụta ihe ngosi nka bu ichikota ihe omuma nke ahia ahia uba na Andorra na n'otu oge iji weghachite mgbidi ochie nke ulo oru mmeputa, ebe akuko a malitere.
Ụlọ ihe ngosi nka dị n'ime ụlọ ụlọ ọrụ ụtaba mbụ, nke malitere ọrụ ya na 1909, Old Reigate, nke a maara dị ka "Kal Rafelo". A na-enye ndị nleta usoro dịgasị iche iche: nke mbụ, a ga-enye gị nlezianya nlezianya mpaghara mpaghara mmepụta ihe, nke ga-agwa gị banyere usoro mmepụta ụtaba, ndị ọrụ na-arụ ọrụ, nhazi usoro ọrụ, otú e si gbanwee gbanwere n'oge ọrụ ụwa n'ụwa na 30s nke narị afọ nke iri abụọ. A na-elegharị ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na olu abụọ: nwanyi na nwoke, nke ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu banyere akụkụ ọ bụla nke ihe ngosi ahụ.
A na-ekewa ihe ngosi nka na ihe ngosi nka n'ime ato ato:
Ụtaba na-eto n'ubi ụtaba. Nkwadebe nke epupụta. A ga-eduzi gị na ebe ụtaba, ebe ị ga-agwa gị gbasara ụdị ụtaba, ụzọ dị iche iche nke na-eto eto, nchịkọta, ịchekwa, na-akwadebe akwụkwọ maka usoro mmepụta nke ọzọ.
Nhazi nke epupụta. Management nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Akụkụ nke abụọ nke ihe ngosi ahụ na-egosipụta usoro usoro nhazi akwụkwọ, nhazi nke usoro ọrụ na ụlọ ọrụ na ụzọ aghụghọ nke ọrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Imepụta sịga. Ntube nke ụtaba ruo ogologo oge nọgidere na-arụsi ọrụ ike na-arụsi ọrụ ike ma ruo taa, a kwenyere na sịga kachasị mma - sịga, aka ya. N'ebe a, ị ga-amụ banyere teknụzụ nke na-emepụta ụtaba, mara ihe eji eme ihe n'oge ochie.
Ụtaba na ahịa ụwa. Ị ga-amụ banyere ụdị ụtaba kachasị ewu ewu ma dị oke ọnụ, banyere ọnyà ahịa.
Ihe ngosi nke oge:
Ụlọ ihe ngosi nka ekenyela ụlọ abụọ nke nwere ihe ngosi na ihe omume dịgasị iche iche nke oge, nke ị nwere ike ịmụta n'ọdịnihu. N'ebe a, e gosipụtara ọrụ nke ndị na-ese foto Pablo Picasso na Rembrandt van Rijn, yana ihe ngosi foto ndị dị mkpa ga-enyere onye ọbịa ahụ aka na Andorra site na anya nke foto.
Kedu otu esi aga ebe na mgbe ị ga-aga?
Otu ụlọ ihe ngosi nka kachasị mma nke Andorra na- emepe ọnụ ụzọ ya site na ụtụtụ 10:00 ruo 20.00 site na Tuesday ruo Saturday, site na ụtụtụ 10 ruo 14.30 na Sunday, na Monday, a na-emechi ihe ngosi nka. Ndị ikpeazụ nke ndị ọbịa nwere ike ịga 1.5 awa tupu emechi. Onye kachasị elu bụ mmadụ 25. Enwere uwe mposi, ụlọ ahịa, cafeteria, ụlọ mpụga.
Ị nwere ike ịbanye na ụlọ ngosi ihe nka site na ụgbọ ala: nhazi 42.464523, 1.491262, nakwa na-esite na ntụgharị No.3 nke njem ụgbọ ala maka Andorra, nke na-amalite site na June ruo September. Ọnụ mbata: 5 euro, na-enwe ego 30% ego ụlọ ngosi nka nwere ike leta site n'ụlọ ezumike nká, ụmụ akwụkwọ na ìgwè nke ihe karịrị mmadụ 20. Ụmụaka nọ n'okpuru 8 nwere ike ịga na ụlọ ngosi ihe nka n'efu.
Ogige siri ike Visconti
Na-eduga ụlọ alakụba
The Museum of the Thalassa Sea Museum
Kedu ihe ị ga - ahụ na Ghent maka ụbọchị 1?
Nkịta anaghị eri ya vomit
Kedu ihe ị ga-eyi uwe mwụda?
Rita Ora na N'ajụjụ ọnụ Vanity Fair kwuru banyere ọbụbụenyi Jay Zee na Prince
Agbamakwụkwọ edozi 2013
Kedu ihe bụ nrọ site na Saturday ruo Sunday?
Onye Nwunye nwanyị Rutina Wesley kwuru na ya na enyi ya bụ Shonda kwadoro
Ngwaahịa maka ụmụ nwanyị dị ime nwere calcium
A akwa site na netwọk: a ejiji ejiji nke Amanda Seyfried
Onye mgbasa ozi na-eche na Aged Christina Aguilera nọ n'afọ atọ
Agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ - echiche kachasị mma
Lishay na ụmụ mmadụ - mgbaàmà na ọgwụgwọ ụdị ọrịa ọ bụla
Ihe omume acrobatic
Okpokoro chara chaa